ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 2009
ငါ ဘယ်လဲ.. ငါမသိ။
DatE Wednesday, December 30, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
စင်အောင်ခုတ်ထစ်၊ နုမျစ်ကယ် ထန်းဦးရေ၊
စားပေသာလှ အုန်းခွက် ကယ်နှင့်လေး။
ငုံ့လျက် ကိုယ်စီသာ၊ ဆုပ်ကာ လွေးတော့သည်။
DatE Monday, December 14, 2009 LaveL kyaukpadaung0comments link this
Copy form >> http://www.ourmandalay.net/
DatE Tuesday, November 17, 2009 LaveL စိတ်အဟာရ0comments link this
မှတ်သားဖွယ် ကွန်ပျူတာ ဝေါဟာရများ
်Motherboard = အမေ့အပြားကြီး
Hard Disk = အမာဝိုင်းပြား
Monitor = အတန်းခေါင်းဆောင်
်key board = သော့ပြားကြီး
Open Source = တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ စူးစမ်းရှာဖွေရေး
မြန်မာအိုင်တီပရို က မအိဝေဖြိုး ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
မူရင်းလင့်က ဒီမှာပါ http://ewphyo.co.cc/?cat=23
အင်း..... ရီရမလား ငိုရမလား မသိတော့ပါဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။
DatE Tuesday, November 10, 20090comments link this
ကျွန်တော်သိသော ဇာတိမြေ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော် တပါးရှိပါတယ်။ ဘွဲ့တော်အမည် အရှင်တေဇနိယ လို့မည်တွင်ပါတယ်။ ဦးဇင်း တိုးတက် သို့မဟုတ် ဦးကျောက်ပန်းတောင်း လို့လဲ အမည်တွင်ပါ တယ်။ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဒန်ကျင်းကျေးရွာ ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ အိန္ဒိယနိူင်ငံ ဗာရာဏသီမြို့ ဆန်ုစကရစ် တက္ကသိုလ် Sanskrit University တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် (MA) ဘွဲ့ရရှိပြီး။ ယင်း တက္ကသိုလ်တွင် (Ph-D ) ဒေါက်တာဘွဲ့ (ဆန်ခရစ်ဘာသာရပ် နှင့် ပါဠိဘာသာ) ဆင်လက်သင်ယူလျှက်ရှိပါတယ်။
ဆရာတော်၏ ဘလော့ဆိုဒ်အား သွားရောက်ကာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော် အမွေနစ် ဓာတ်ပုံများစွာကို ကြည်ရှု နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Sanskrit University အကြောင်းများ ဆရာတော်ရေးသားသော တရားစာ ပေများ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ သွားပါ. - http://ukyaukpadaung.wordpress.com/
DatE Wednesday, September 30, 2009 LaveL kyaukpadaung0comments link this
ပဉ္စ၀ဂီ ငါးကို တရားဟောတော်မူတဲ့ သရုပ်ဖေါ်ပုံကို မစဉ်းမစား ကျော်ညာ အဖြစ်နဲ့ သုံးထားတာဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဖန်ဆင်းရှင် အဖြစ် မြင်နေကြတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာသာတရားကို အသုံးချမှုမျိုး ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က ဖော်ဝါ့မေးမှာ မြန်မာ့ပြည်က ဒီဂျေ လူငယ် တစ်ယောက်ပုံကိုလဲ တွေ့လိုက်ရတယ်။
မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ကြတယ်။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပဲလို့ မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပဲပေါ့။
DatE Tuesday, September 29, 2009 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
အခုမှ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဖတ်လေ ဖတ်လေ အဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်လေပဲ။
ဘာသာမပြန်တော့ဘူး။ ဖတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်....... :)
Suddenly, his son falls, hurts himself and screams: "AAAhhhhhhh!!!"
To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain: "AAAhhhhhhh!!!"
By --- Unknown Author
DatE Thursday, September 17, 2009 LaveL စိတ်အဟာရ0comments link this
သဲပြင် နဲ့ ကျောက်တုန်း
ဒီပုံပြင်လေးဟာ ကန္တာရကို ဖြတ်ပြီး ခရီးသွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး ခရီးနှင်လာကြရင်းနဲ့ တစ်နေရာ အရောက်မှာ စကားများကြတယ်။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က စိတ်မြန် လက်မြန်နဲ့ ပါးရိုက်ပစ်လိုက်တယ်။
ပါးရိုက်ခံရတဲ့ သူဟာ နာကျင်သွားပေမယ့် ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ သဲပြင်မှာ စာတစ်ကြောင်း ရေးတယ်။
" ဒီနေ့ ငါ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ငါ့ကိုပါးရိုက် ခဲ့တယ်".
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စကားမဆိုတိတ်ဆိတ်လို့ ခရီးဆက်ကြရင်း မထင်မှတ်ဘဲ အိုအေစစ်လေး ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ရေချိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
ရေချိုးရင်းနဲ့ လမ်းခရီးမှာ စကားများလို့ ပါးရိုက်ခံရတဲ့ တစ်ယောက်ဟာ စိမ့်စမ်းနွံထဲကို ကျလို့ နစ်သွားတယ်။ တဖြေးဖြေး နဲ့ လှုပ်လေ မြုတ်လေ ဖြစ်နေလေတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ငယ်ချင်းက ကယ်တင်ခဲ့တယ်။
နွံထဲကနေ လွတ်လာတဲ့အခါ သူဟာ ဘေးမှာရှိနေတဲ့ ကျောက်းတုန်းမှာ စာတစ်ကြောင်း ရေးတယ်။
"ဒီနေ့ ငါ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ငါ့အသက်ကို ကယ်ခဲ့တယ်"
အဲဒီမှာ ပါးရိုက်တဲ့သူတဖြစ် သူ့ကိုကယ်တဲ့သူငယ်ချင်းက စဉ်းစားလျှက် သူ့ကိုမေးတယ် -
"ငါမင်းကို နာကျင်စေခဲ့တုန်းက သဲပြင်မှာ ရေးတယ် အခု မင်းကိုကယ်တော့ ကျောက်တုန်းမှာရေးတယ် အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ"
ပါးရိုက်ခံရသူတဖြစ် နွံနစ်သူက ပြန်ပြောတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ငါတို့ကို နာကျင်စေတဲ့အခါ လေဖြင့် ဖျက်ရလွယ်တဲ့ သဲပြင်ပေါ်မှာ ရေးမှတ်သင့်တယ်။
အေး .. တကယ်လို့… တစ်စုံတစ်ယောက်က ငါတို့အပေါ် ကူညီဆောင်မတဲ့အခါ ငါတို့ဟာ ကျေးဇူးသိတတ်ပြီး လေအားနဲ့ ပြောက်ပျက်မသွားနိုင်တဲ့ ကျောက်တုန်းမှာ ရေးထွင်းလို့ မှတ်တမ်းတင်သင့်တယ်။
မင်း ငါ့အပေါ် နာကျင်စေခဲ့တာ သဲပြင်မှာ ငါရေးခဲ့တဲ့စာသားပျက်သွားသလို ငါ့ရင်မှာ မရှိဘူး သူငယ်ချင်း။
အခု မင်းငါ့ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတရားကတော့ ကျောက်တုန်းထက်က စာသားလို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပေါ့ကွာ။
DatE Wednesday, September 16, 2009 LaveL စိတ်အဟာရ0comments link this
ဘလောဂါ အကို၊ အမ၊ ညီ၊ ညီမ တွေကို.... သတိရပါတယ်.
တကယ် တကယ်.. ညက အိမ်မက်မက်လို့ .. ရေးလိုက်တာဗျ..
ဆရာကိုသူရိန် က မေးတယ်.. ဘလော့ကို စိတ်ကုန်သွားပီလားတဲ့။
အဲလို မဟုတ်ဘူး.. မဟုတ်ဘူး.. လုံးဝ မဟုတ်ဘူး..
ကိုယ်တိုင် မရေးဖြစ်လို့ပါ.. သူငယ်ချင်းတွေဆီက .. စာတွေခိုးခိုး ဖတ်နေတာ သူမသိရှာဘူး..
ဘလော့ဆိုတာ သတင်းမှန် ရပ်ကွက်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်. တစ်ဦး တစ်ယောက် အာဘော်ထက် ကွန်မင့်တွေကို ဖတ်ချင်တယ်လေ။
ကျွန်တော်လဲ.. ရေးပါမယ်.. ရေးမယ်... စိတ်ကူးရှိတယ်.. (ElephanT ကြံ ကြံနေတယ် မထင်စေလိုပါ).
DatE Monday, September 14, 2009 LaveL လာလည်သူများသို့0comments link this
ကန္တာရ လမင်း ။
အာရုံတက် နေမင်းကို ကြည့်ပြီး
DatE Thursday, August 20, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိသော်လည်း မရေး ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ စိတ်ကူးလေးရတာနဲ့ နည်းနည်းရေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ဒေသ အကြောင်း တွေးနေတဲ့ အခါ မှာလဲ ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြီး နွေးထွေး လာတယ်။ တကယ်ဆို ဟိုး .. လွန်ခဲ့တဲ ၁၀ နှစ်လောက်က ကျောက်ပန်းတောင်မြို့ဟာ ကျွန်တော့်အဖို့ အနည်းငယ် စိမ်းနေသေးတယ်။
ကျွန်တော် န၀မတန်းနှစ်က မန်ကျီးကုန်း အထက်တန်းကျောင်းမှာ တက်ခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်းနှစ်မှာ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့လေးက အထက (၁) ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းမှာ အခန်းက (H) အခန်း. သင်္ချာ ဦးငြိမ်းရွှေ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဒေါ်ခင်မြ၀င်း ၊ သိပ္ပံတွဲ သင်တဲ့ ဒေါ်တင်တင်အေး တို့ အဲဒီလို ကျူရှင်လောက နာမည်ရ ဆရာ ဆရာမတွေ နဲ့ သင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျူရှင်တက်တော့ ဆရာ ဦးမောင်မောင်၊ ဦးထွန်းထွန်း ဒေါ်ခင်မြ၀င်း တို့ဆီမှာပဲ။ ဆရာမ ဒေါ်ခင်မြ၀င်း ဆီမှာ တော့ ကျွန်တော်က ကျူရှင်ခ အခမဲ့တက်ခဲ့ ရတယ်။ ဦးမောင်မောင်ဆီမှာလဲ ကျူရှင်ခကို ပေးတလှည့် မပေး တလှည့်ပါပဲ။ ဆရာကလဲ ပြောတယ် လေ "ငါ့ တပည့် ကျူရှင်ခကို ပေးနိုင်မှ ပေး ၊ အတန်းချိန်တော့ မပျက်နဲ့တဲ့" ကွက်တိပဲပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့် မိဘတွေ ကလဲ မိုးလေ၀သ သိပ်မမှန်တော့ စီးပွားရေးတွက်ချေမကိုက်ဘူးကို။
ဆရာ ဆရာမတွေ ကျူရှင်မှာ ထိုင်တော့လဲ အရှေဆုံးခုံက။ တောက်တိုမယ်ရ လုပ်တော့လဲ ဆန်းဝင်း ပဲပေါ့။ ဘော်ဒါတွေလဲ မရှိသေးဘူး။ ၀ိုင်းနဲ့ ကျူရှင်ပဲရှိတယ်။ "ထူးခြားတာက ဆရာ ဆရာမတွေက ငွေကြေးထက် ပညာကို ပိုပြီးတန်ဖိုးထားကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အပေါ်မှာ စေတနာထားတယ်။ အမုန်းခံ ဆုံးမကြတယ်။ ဆရာတွေနဲ့ လမ်းမှာတွေ့သည်။ ဈေးမှာတွေ့သည်။ ၀င်းဝင်း စီနီမာမှာ တွေ့သည်။ ထိန်ကန်ဘက် မှာတွေ့ သည်။ စေတီကြီးမှာ တွေ့သည်။ ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် မမြင်မတော်တာကို ပြောဆိုဆုံးမ ကြတယ်"
အဲဒီနေ့က တနင်္လာနေ့။ ကျွန်တော် အိပ်ယာထ နောက်ကျတယ်။ မျက်နှာသစ်ြပီး ကျူရှင်ကို အပြေး သွားရတယ်။ ကျူရှင်က ပြန်လာတော့ ထမင်းချက်။ ညဦးက မိုးရွာထားတော့ မီးသွေးအိတ်က မိုးမိသွား တယ်ဗျာ။ မီးမွေးဖို့ ထင်းရှူးသားကခွဲရသေး။ ထမင်းကျက်တော့ ရေးမိုးချိုး။ ထမင်းပူပူ ကို ရယ်ဒီမိတ် အိမ်က ချက်ပေးတဲ့ ဟင်းနဲ့ အမြန်လွှေးရတယ်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုးနာရီ။ ကျောင်းဝတ်စုံ ပုဆိုးအစိမ်းလေးနဲ့ အဖျြူရောင် ရယ်ဒီမိတ် ရှပ်အင်္ကျီလေး အမြန်ဝတ်ကာ ကျောင်းကြီးအတွက် စာအုပ်တွေ ထည့်ပြီး စက်ဘီးကို အမြန်နင်းလို့ အိမ်ကထွက်ခဲ့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း စက်ဘီးနင်းအလာ ဈေးနားရောက်တော့ ဈေး စခင်းနေပြီ။ အိုး … များလိုက်တဲ့ လူတွေ ဈေးရောင်း ဈေး ၀ယ်တွေ စုံလို့။ မြင်းလှည်း ဆရာရဲက လှည်းဘီးကြားကို နှင်တံလေး နဲ့ထိုးလို့ (တောက်.. တောက် တောက်) နဲ့ အချက်ပြ သံ။ "ထုန်းထုန်း ထိုင်းထိုင်း" နဲ့ ထော်လာဂျီ သံတွေ မရိုးနိုင် တဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ဖြတ်ရင်း။ ဈေးခေါင်းရုံးနား အရောက်မှာ …
ဈေးဘန်းရွက်လာတဲ့ အဒေါ်ကြီး တစ် ယောက် နဲ့ ကျွန်တော် ထိပ်တိုက် တိုးတာပဲဗျာ။ ပျံကျဈေးမှာ နေရာ တစ်ခုရဖို့ အပြေးနှင် လာတယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ကလဲ ကျောင်းတံခါး မပိတ်ခင် ကျောင်းထဲရောက်ဖို့။ အရေးနဲ့အကြောင်း ဆို ကျွန်တော် စက်ဘီးဘရိပ်အုပ်ဖို့ မေ့နေတယ်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦးရှောင်ဖို့အရေး ဘယ်ညာ ပြိုင်တူ ရွေ့လို့ ထုပ်စီးတိုးပွဲ တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က စက်ဘီးနဲ့ အဒေါ်ကြီးက ဈေးဘန်းနဲ့။ မျက်စေ့ထဲမြင်ကြည့်ကြပါဗျာ။ အဒေါ်ကြီး ခြေနှစ်ချောင်း ကြားကို ရှေ့ဘီးရောက်သွားပီ။ အဒေါ်ကြီးလဲ ဈေးဘန်းကို လွှတ်ကာ နောက်ကို ပက်လက်လန် လဲသွားပါ လေရော။ စက်ဘီးလဲကျသွားကာ ကျွန်တော့် အပေါ်ကို ပိလို့ အဒေါ်ကြီးရဲ့ ဈေးဘန်းက ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့် လက်ထဲ ရောက်လာလဲ မသိလိုက်ဘူး။
ဘေးနားက လူတွေက ၀ိုင်းကူကြတယ်။
တော်သေးတယ် အဒေါ်ကြီး ဘာမှ မဖြစ်လို့။ "မောင်ကျောင်းသားရယ် အဒေါ်တောင်းပန်ပါတယ် ဈေးထွက်ဖို့ နောက်ကျနေလို့ အဒေါ့် အမှားပါကွယ်" အဲဒီစကား ကိုအဒေါ်ကြီး ဆီက ကြားလိုက်ရစဉ် ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ အရမ်း အားနာ သွားမိတယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်တော်က ၀င်တိုက်မိတာပါ။ ၀ိုင်းကူကြတဲ့ လူတွေကလဲ ကျွန်တော့်ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ပေါ့။ ရင်ထဲမှာ ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။
အဲဒီနေ့ကစလို့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့လေးရဲ့ နွေးထွေးမှုကို ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်။ မြို့သူ မြို့သားတွေက ကျောင်းဝတ်စုံ အစိမ်း အဖြူလေးနဲ့ အထက်တန်း ကျောင်းသားလေးတွေ ဆို ဦးစား ပေးကာ ပညာရေးကို တန်ဖိုးထား အားပေးကြတာ ကျွန်တော်သိ လိုက်ရတယ်။ ဒီအဖြစ်ပျက်လေးကို စက်ဘီးလဲပြီး ဘယ်ဘက် ခြေထောက်မှာ ပွန်းသွားတဲ့ ဒဏ်ရာလေးကို မြင်တိုင်း သတိရနေမိတယ်။ မြို့သူ မြို့သားတွေ ၀ိုင်းချစ်ကြတဲ့ ကျောက်းပန်းတောင် မြို့ကို ကျွန်တော်လဲ ချစ်တတ်လာခဲ့တယ်။ "ပညာမြှင့်မှ လူမျိုးမြင့်မယ်" ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ယုံကြည်ထားတဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့သူမြို့သားတွေ နဲ့အတူ ထပ်တူကျတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ကျွန်တော့် နှလုံးသားမှာ ယနေ့ထိ ရှင်သန်ဆဲ့ပါပဲ။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျောက်ပန်းတောင် မြို့သူ မြို့သားတွေရဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ရှင်သန်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင်း ……
DatE Saturday, August 15, 2009 LaveL kyaukpadaung0comments link this
ကျွန်တော် ဘလော့လေးကို ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါလောကကို ဖြူသလား မဲသလား သိအောင် ဘလော့လေးနဲ့ ဘလော့တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်က နိုးစွပေးခဲ့ပါတယ်။ စာတွေရေးသားချင်အောင် အားပေး တဲ့ ညီကိုမောင်နှမ ဘလော့ဂါ အပေါင်းကိုလဲ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ယခု လောလောဆယ် အခြေနေအရ ဘလော့မရေးဖြစ်သည်က တစ်ကြောင်း၊ ရုံးမှာ အရင်လို မလစ်တော့သည်မှာလဲ တစ်ဖုံ၊ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမ၀ယ်နိုင်သေးသည်က တစ်လင့်။ အာရုံကျက်စားရာ နေရာပြန့်ကျဲမှု နှင့် ဘ၀ အခြေကျမှု တို့က တစ်မည်။ သို့ကလို အကြောင်းကြောင်းများ (ဆင်ခြေ ဆင်လက် ဆင်နားရွက်များ) မရေးဖြစ်သေးပါ ခင်ဗျာ။ Eမေးမှ ပို့စ်များ ရံဖန်ရံခါ တင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လူမတွေ့သော်လည်း ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေး မောင်ဆန်းဝင်း ဘလော့လေးမှ ကြိုဆိုလျှက် ပါခင်ဗျာ။
မှတ်ချက် = ဒီနေရာလေးမှာတော့ ရှိနေဦးမယ်။
အမြဲတန်းလိပ်စာကတော့ = sanwin26@gmail.com and sannwinn@yahoo.com ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လေးစားလျှက် >>> ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) ။
DatE Wednesday, August 05, 2009 LaveL လာလည်သူများသို့0comments link this
ရုံးဘေးမှာ ပွင့်နေတဲ့ ဘဒုံမာ ပန်းပင်ကို ကြည့်လို့ အညာကို သတိရသွားမိတယ်။ ဒီပန်းလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ အညာမှာတော့ ခြံစည်းရိုး မှာ စိုက်လို့အသုံးပြုပါတယ်.. ဒီစင်္ကပူမှာတော့ အလှပန်းအဖြစ် နေရာရနေတာပေ့ါ။ အပွင့်က ချက်စားလို့ရတယ်။ အသီက လဲ ကြက်မောက်သီးလိုပဲ အနီရောင် အလုံးပြောင်ချော ပုံရှိတယ်။ အပင်က ဆူးပင်ဖြစ်ပေမယ့် ဆိတ် အလွန်ကြိုက်တယ်။ ရေရှားတဲ့ နေရာမှာလဲ ရှင်သန်နိုင်တယ်။
မမြင်ဖူးရင် ကြည့်ထားပေါ့။ အညာပုံရိပ်တခုပါပဲ။
DatE Saturday, August 01, 2009 LaveL kyaukpadaung0comments link this